News | प्रियंका चोपडा
News | Tag: प्रियंका चोपडा
श्रीमान निकलाई ‘ओएमजी’ भन्ने अभिनेत्री प्रियंका
अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफ्नो श्रीमान निक जोनासलाई ‘ओएमजी’ भन्छन् । ‘मैले निकको नाम ओएमजी राखिदिएको छु’ प्रियंकाले एक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘ओल्ड म्यान जोनास भन्छु उनलाई । धेरै स्मार्ट परिपक्व छन् । उनी असल श्रीमान हुन् ।’
यौन उत्पिडनमा प्रियंका
बलिउड गर्ल प्रियंका चोपडाले हालै एक कार्यक्रममा आफूसमेत यौन उत्पिडनमा परेकी खुलासा गरेकी छन् । न्युयोर्कमा भएको विश्व शिविर वार्षिक महिला सम्मेलनको १० श्रृङ्खलामा सहभागी हुँदै उनले कार्यक्रम सञ्चालिका टिना ब्राउनसँग आफूसमेत यौन उत्पिडनबाट जोगिन नसकेकी र सो समयमा यस्तो विषय नसुनिने भएकाले नबोलेकी बताइन् ।
इतिहास रच्दै प्रियंका, म्याडक तुसादमा ६ स्ट्याचुको साथमा बनाइन् रेकर्ड !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा एक ग्लोबल आइकन बनिसकेकी छन् । प्रियंकाकी पहिलो गीत ‘इन माई सिटी’को साथमा अमेरिकामा पनि निकै लोकप्रिय भइन् । त्यसपश्चात उनले टिभि सिरिज ‘क्वान्टिको’ मा काम गरिन् ।
प्रियंका चोपडा सुटिङमा ब्यस्त, निकले गरिरहेका छन् विहेको सपिङ !
काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका चोपडा, जो राजस्थानमा आफ्नो आगामी फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’को सुटिङमा ब्यस्त छन् ।
दीपिका र प्रियंकापछि बेहुली बन्ने पालो आलियाको !
काठमाडौं । केही दिन अघि बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र अभिनेता रणवीर सिंह वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका छन् । यसका साथै बलिउडकी अर्की अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पनि अमेरिकी गायक निक जोन्सको साथमा चाँडै बैबाहिक बन्धनमा बाँधिदैछन् ।
जब प्रियंका चोपडाले तीनपटकसम्म आत्महत्याको प्रयास गरिन्
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चीत नायिका प्रियंका चोपडाले तीनतीन पटक आत्महत्या गर्ने कोसिस गरेको खुलासा भएको छ । उनका पुर्व म्यानेजर प्रकाश जाजुले यस्तो रहस्य बाहिर ल्याएका हुन् ।
प्रियंका र अमेरिकन प्रेमी निक एयरपोर्टमा एकैसाथ देखिएपछि...
एजेन्सी । अफेयरको खबर आइरहेका बेला प्रियंका चोपडा फेरि अमेरिकन गायक निक जोनासको साथ देखा परेकी छन् ।